The Red Shalk : hetsika miavaka ampiroboroboana ny fandraharahana – Blaogin'i Voniary
Zava-dehibe ny fahaiza-mamorona amin’izao vaninandro iainantsika izao mba iavahana amin’ny besinimaro. Maneho izany indrindra ity hetsika nokarakarain’ny 100startups sy Passion 4 Humanity ity, mitondra ny anarana hoe « The Red Shalk ». Ny tanjona dia ny mba hampiroboroboana ny fandraharahana izay fantatra fa andry iankinan’ny fandrosoan’ny firenena iray. Notanterahina ny tontolo andron’ny sabotsy 30 Martsa lasa teo tao amin’ny Is’Art Galérie ny andiany voalohany. Indro ary taterina aminao ny andinindininy.
Inona moa ity « The Red Shalk » ity ?
Hetsika hafa kely, satria navoitra ny fampiasana ny sary sy ny teknolojia mba hampahafantarana ny orinasa sy ny vokatra ao aminy.
« Raha fintinina dia fampiroboroboana ny fandraharahana amin’ny alalan’ny kanto sy ny fikirakirana teknolojia izy io. »
Hoy indrindra i Fara Rabeson avy ao amin’ny 100 startups, izay tompon-kevitra tamin’io hetsika vaovao be io:
Ahoana ary ny fandehan’ny hetsika ?
Voalohany, niantso izay orinasa madinika vao misandratra vonona haneho ny vokany amin’ny fomba moderina ny mpikarakara. Faharoa, nanao fanaikana ireo mpaka sary zazavao ihany koa izy ireo mba hifaninana haneho ny entana varotan’ireto orinasa amin’ny fomba kanto. Ary fahatelo, nentanina ireo mpahay kajimirindra hifaninana ihany koa amin’ny famoronana tranonkala, rindrambaiko sy fitaovana mifandraika amin’ny kajimirindra mikasika ny orinasa sy ny entana vokariny.
Famoronana tranonkala, rindrambaiko sy fitaovana mifandraika amin’ny kajimirindra
Iza avy ireo nandray anjara ?
Orinasa madinika 5, mpaka sary 6 ary mpahay kajimirindra 10 no namaly ny antso.
Karepoka – ilay endi-mankahazo biolojika, Manjary – orinasa mpamokatra voankazo sy legioma noamainina, Ny Hanitro – mpanamboatra savony ary Labell’o vert sy Violet – mpanamboatra vokatra fikirakirana taovolo sy endrika vita avy amin’ny akora voajanahary. Ireo no orisana vao misandratra sahy niroboka ka nampahafantatra ny vokany tamin’ity « The Red Shalk » andiany voalohany ity.
Samy nanao izay ho afany ary ireo mpaka sary zazavao tamin’ny fanehoana an-tsary ny vokatr’ireto orinasa madinika. Natolotra ny mpanaraka ny pejy tao amin’ny Facebook sy ny mpitsara, izay mpaka sary matihanina, ny fisafidianana izay mendrika indrindra. Nahazo ny laharana voalohany àry i Connie Mana izay naneho ny vokatr’i Violet tamin’ny fomba kanto tokoa araka izao hitantsika manaraka izao. Azona jerena ao amin’ny pejy Facebook « The Red Shalk » ny sarin’ny mpandray anjara rehetra.
Déodorant naturel Violet “The Raspberry beyond the colors”
cc : Connie Mana
Ny ekipan’ny Karepoka kosa no nahazo ny isa ambony indrindra tamin’ny fifaninana famoronana fitaovana mifanaraka amin’ny teknolojia. Namorona rindrambaiko am-pinday afahana mamandrika sy mividy ny vokatra ary mandoa vola mihitsy izy ireo. Tsy vitan’izany fa mamoaka rosia ilay rindrambaiko amin’ny farany mba hanamarinana ny fandoavam-bola nataonao.
Nanao ahoana ny akon’ny « The Red Shalk 1 » ?
Mety betsaka ny hanakiana ary tsy vitsy ny sadaikatra manoloana ny tsy fahafantarana ny tombontsoa ho azon’ny tsirairay tamin’ity hetsika ity. Ireo nandray anjara anefa dia azo lazaina fa nazoto sady resy lahatra tanteraka.
« Mba ho fampahafantarana ny orinasa keliko sy ny vokatray no antony nandraisako anjara tamin’ity hetsika ity. Ary ny tohiny andrasako dia mba hotanterahina ity tetikasa famoronana ivonkala misy tranonkala sy « chatbot messenger », izay ketrehinay telo mianadahy eto ity ! »
Hoy i Stannie, tovovavy vao erotrerony tompon’ny orinasa Manjary
« Tiako ny manandrana zava-baovao, mba miova amin’ny mahazatra e ! Mahafinaritra ahy ihany koa ny mahita olona vaovao ary mampitombo isa ireo olom-pantatro !»
Hoy indray i Tolotra, mpahay kajimirindra
Mila mihetsiketsika tokoa ny mpandraharaha Malagasy amin’izao vaninandro iainantsika izao satria tsy vitan’ny hoe maro ny mpifaninana eto an-toerana fa mmitobaka ihany koa ny vokatra avy any ivelany. Izaho manokana aloha dia mamporisika ny mpandraharaha ho sahy hamorona vokatra miavaka sy hanandrana fomba vaovao tahaka ity hetsika « The Red Shalk » ity. Ary manentana indrindra antsika rehetra ihany koa mba hanjifa hatrany ny Vita Malagasy.
fahaiza-mamorona, fananganana orinasa, fandraharahana, kajimirindra, mpaka sary, mpandraharaha malagasy, The Red Shalk